Arbaco, Jan 20, 2021-Ciidamada dowladda oo la wareegay deegaanno ka tirsan gobolka Jubbada Hoose – LaacibOnline
Arbaco, Janaayo, 20, 2021 (HOL) – Kaddib howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in ay kula wareegeen deegaanno muhiim ah oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose kuwaa oo markii hore gacanta ugu jira xoogagga Ururka Al-shabaab.
Gobolka Jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha ay ku xooggan yihiin dagaalyahannada ururka Al-shabaab oo weerarro kala duwan ku qaadan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ee qeybta ka ah howlgalka midowga Africa AMISOM.
Deegaannada ay howlgalka ka sameeyeen ciidamada ayaa waxaa ka mid ah Beer-xaani,Cabdi dhoore, Qudus iyo Liba kuus oo ay saaraakiishu sheegeen in gabi ahaanba ay kala wareegeen xoogagga Ururka Al-shabaab.
Intii uu howlgalkku socday ayeey sidoo kale saraakiisha ciidamadu sheegeen in ay qabteen xubno ka tirsan Ururka Al-shabaab oo ku sugnaa deegaannada howlgalka laga fuliyay.
Ma jiro dhinaca Ururka Al-shabaab wax war ah oo ka soo saareen sheegashada saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Jubbada hoose.
← Review Of The Day 20th January 2021
Somalia: Why Somali Clan Elders Could Hold the Key to Opening Dialogue With Al-Shabaab →
Arbaco, Oct 21, 2020-Al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig booliiska Kenya ku leeyihiin Mandhera
Talaado, July 7 , 2020-Gudiga gurmadka fatahaadda Baledweyne iyo Madaxweyne Waare oo kulan kula qaatay Internetka Injineero ajaaniib ah
Arbaco, Sept 9 , 2020-Qoor-qoor oo Deni iyo Axmed Madoobe ugu baaqay iney qorshe wacan la yimaadaan